Uhlu Oluphelele lweMisebenzi ye-Cryptocurrency: I-EOS, i-Ripple, iLitecoin nokuningi!
Iseluleko semisebenzi ye-Cryptocurrency yamathuba weBlockChain Career
Imisebenzi yamaNdiya yeGulf
Imisebenzi eDubai nge-visa - Thola Izinkampani Zokuqasha
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Mashi 10, 2018
Thola imisebenzi ye-Cryptocurrency
Imakethe yemisebenzi ye-Cryptocurrency ikhula ngokushesha emhlabeni wonke. Dubai Idolobha liba uHulumeni wokuqala onamandla amakhulu we-blockchain. Ngabe idolobha lethu lifisa ukuba nguhulumeni wokuqala onamandla ka-blockchain ngaphambi kwe expo 2020? Izikhala zemisebenzi ye-Cryptocurrency zikhula njengamahlanya. Maningi kakhulu amathuba emisebenzi amasha awenzelwe ngisho nabasebenzi abangewona ama-IT. Abantu bafuna izinkampani zokuqalisa ezinjengeBitcoin noma i-Ethereum noma uhlelo lokukhokha lwe-Ripple. Isibonelo, iwebhusayithi yeBitcoin.com yakhiwa ngemuva kwentsha yayo ibhizinisi emhlabeni jikelele.
Lapho ucabanga ngayo yonke i-crypto umsebenziamathuba emisebenzi ahlobene. Kufanele nakanjani ucabange iwebhusayithi yeBitcoin.com yomsebenzi. Bayinkampani enkulu kunazo zonke emakethe yezimali ye-crypto. Empeleni, imakethe ikhula ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke, ungathola cryptocurrency imisebenzi kude ngokushesha kakhulu ngonyaka olandelayo. Imakethe yezindaba ye-Cryptocurrency ngokuqinisekile ihambisa izindaba zomhlaba jikelele. Ikakhulukazi ekuphukeni kokusheshisa phakathi kweziteshi eziningi. Uma ufuna umsebenzi embonini ye-cryptocurrency. Manje kuyamangalisa isikhathi sokuba yimpumelelo yokufuna umsebenzi.
Ngakolunye uhlangothi, izinkampani ze-cryptocurrency zikhula ngokushesha okukhulu kunokuba besola. Izinkampani ezintsha zakha ngokungalingani ukutshalwa kwezimali nokukhula ezinyangeni ezedlule emakethe yomsebenzi we-cryptocurrency. Futhi ngenkathi ubuchwepheshe obuningi obusha busakhula. Imakethe ye-cryptocurrency ihlala ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu futhi ezishesha kunazo zonke. Ukuqashwa kwe-Cryptocur lwemali kuyakhula phakathi kwamathuba okuqalisa okungewona ezinkampani. I-Angeline.co iphathe isimanga kubika mayelana nemakethe ye-cryptocurrency.
Akukhona nje kuphela imisebenzi eminingi iyatholakala, kodwa izikhundla ezisebenza ne-blockchain nazo zikhokha kangcono. Abasebenzi abajwayelekile banikezwa amaholo ka-10-20 ngamaphesenti aphezulu kunemisebenzi engeyona ye-crypto.
I-Cryptocurrency ikhula ngokushesha
Imali ikhala ezinkampanini ze-cryptocurrency kanye nokuqala okusha. Kusuka kwenkampani yenkampani ye-AngelList, inkampani ibheke engxenyeni yokuqala ye-2018. Futhi thola ukuthi utshalomali embonini ye-cryptocurrency ngu ikhula ngokushesha kakhulu kunezinye izimakethe. Ngaphezu kwalokho, kukhona imali eningi etshalwa imali kumafemu e-cryptocurrency ku-2019 kunayo yonke i-2010 ne-2016 ehlangene.
Dubai City futhi inengxoxo yayo yebhodi yemisebenzi ye-cryptocurrency. Ngokuvamile ukukhuluma ngekusasa lezezimali I-crypto emhlabeni e-Dubai. Nakuba lokhu kungase kube yiqiniso lomcimbi omusha kakhulu futhi okhetheke kakhulu ku-Keynote. Kwafakwa kuphela ekuhlonipheni, ukunethezeka e-Dubai, kanye nomkhathi webhizinisi Jumeirah Mina ASalam.
Ngesikhathi esifanayo, izinkampani ze-cryptocurrency zikhula kodwa hhayi kuphela e-Dubai. Amafemu amasha akhulisa imali emikhulu Europe kanye ne-United States ngokulinganisa okuphakeme kakhulu. Ngakho, ngaphansi kwalezo zimo, entsha izinkampani zinezidingo zabo zokuqasha ukuthola ithalenta eliphezulu.
Inani lezinhlu zokuqashwa komsebenzi likhula nsuku zonke kumasayithi omphakathi. I-cryptocurrency eqasha izinkampani sekucishe kuphindwe kabili inani lezikhundla ezinyangeni eziyisithupha zokugcina. I-Cryptocurrency Imisebenzi ikhula njengenhlamba e-UAE.
Indlela yokuthola umsebenzi ku-cryptocurrency?
Abafuna umsebenzi bajabulela nje imakethe ye cryptocurrency ngenxa yokukhula okusheshayo okukhulu. I-cryptocurrency likhula ngokushesha futhi libeke phambili ukuguquguquka kwemisebenzi yabasebenzi bayo.
Ngakolunye uhlangothi, izidingo ezintsha kufanele ziqaphele ukuthi izinkampani ezisekelwe kwibhange zizokhula ngokushesha kakhulu esikhathini esizayo. Isibonelo, imisebenzi ye-cryptocurrency imisebenzi ye-NYC yokuqalisa i-25% amathuba amaningi okunikeza izikhundla ezikude kubasebenzi bayo. Ngakho uma ufuna umsebenzi futhi unolwazi ku-blockchain. Ungaphinda uhlose imisebenzi engeyona ezobuchwepheshe kule mboni. Isibonelo, unga sebenze ezindaweni eziningana ezifana nokumaketha nokusebenza.
Imfundo ephezulu ye-tech ayikho ngempela Kudingeka ukuthi uqale umsebenzi nge Bitcoin. Imibiko emisha evela emakethe yezezimali ibonisa abasebenzi abasebenza. Abasebenzi abasha kufanele baqonde kuphela imiqondo kanye nesimiso se-crypto emakethe yamagama emakethe. Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthola umsebenzi emakethe ye-cryptocurrency. Ngokuvamile ukufaka izicelo zezinkampani zokushintshanisa zemali.
Labo abaxoshwa abangafuni ngempela ukwenza umsebenzi wokukhipha i-cryptocurrency. Ungakwazi ukucinga njalo emakethe ye-CryptoCurrency. Kukhona njalo ukuphuma kwabazingeli bamasha emisebenzi yokukhetha. Isibonelo, uma ufuna ushintsho lomsebenzi kusuka embonini yakho yamanje. Kufanele ucabange ukusebenza njengonjiniyela we-blockchain noma ukumaketha umphathi ngaphambi kokufaka isicelo emayini yamalahle i-Bitcoin Industry. Kukhona njalo ikusasa kubuchwepheshe be-cryptocurrency.
Imisebenzi ekhulayo e-Block Chain e-Dubai?
The UAE ukuzama ukuba nguhulumeni osebenza ngokugcwele blockchain. Lokho kusho ukuthi zonke izinsizakalo zalo zizoshintsha nakanjani, kufaka phakathi izicelo ze-visa, ukudluliswa kwemali, ukushintshaniswa kwemali, kanye nokukhokhisa ngemali ekhokhwayo yasekhaya kanye nokuvuselelwa kwelayisense.
The I-United Arab Emirate ihlose ukuzuza uhlelo olusebenza ngokugcwele yi-2020 lapho ubuchwepheshe obusha bufana nokukhulisa ngaphezulu kokukhiqiza kwe-50% emikhakheni kahulumeni nakwezikahulumeni. Lokho kufanele kusize nangesikhathi esichithwa emsebenzini osisekelo, nemali encane esetshenziswe kwisabelomali se-UAE.
Iwebhusayithi ye-Smart Dubai
Ubuchwepheshe obusha buzoqala ukuthatha indawo hhayi eDubai kuphela kepha nase-Abu Dhabi futhi uzothuthelwa ezweni lonke. Eminyakeni elandelayo ibhizinisi le-blockchain lizokhipha izinhlelo eziningi ezindala. Into eyodwa esiyaziyo nakanjani izokwenzeka Guqula izimboni kuyo yonke indawo eMiddle East nasemazweni ambalwa njenge I-Saudi Arabia kanye neQatar. The Emirates ngaso sonke isikhathi benza izinhlelo zabo zakudala zibe zintsha. Futhi ngokuqinisekile ezimbalwa zezindawo ezinkulu i-UAE ebheke ukuyiguqula eminyakeni elandelayo kuzoba yizindawo ezithengiswayo, ukudluliselwa kwemali kanye nezinhlelo zokukhokha.
Abantu bebhizinisi bazoletha ubuchwepheshe be-blockchain emisebenzini yangempela yebhizinisi e-UAE nase-Saudi Arabia. Isibonelo, gcina uhlelo lokukhokha luzohamba ngendlela ende ekusizeni ukuqonda ukuphepha nokukhulisa ukuzethemba kwabathengi kwezobuchwepheshe.
Abaphathi bakahulumeni base-Emirates benze imithetho eqinile embonini ye-blockchain. Bahlale beqinisekisa ukuthi konke ukuthengiselana kugcinwa futhi kuphephile futhi nakanjani kulandelwa ngokugcwele.
Ngakolunye uhlangothi, kunezinto ezimbalwa ezinhle ongayenza nge-cryptocurrency. Ungathenga nokuthengisa izindlu zeBitcoin noma ngisho Thenga izimoto zemidlalo ye-bitcoin. Kunezinto eziningi ongazithola uma nje ungumnikazi we-cryptocurrency.
I-Real Estate ne-Bitcoin!
Ingabe i-UAE ilungele i-blockchain?
Izinkampani ze-UAE seziqalile ukuthatha amaphrojekthi amaningi, ukuqala okusha ukusebenzisa ibhizinisi layo lobuchwepheshe be-blockchain. Zimbalwa izinkampani ezinkulu ze-tech eziqala ukukhipha imali edijithali. Ngokwesibonelo, I-Mercedes ikhokhelwa yamukelwa ekuthengiseleni kwemingcele phakathi kwamakhasimende nabaphathi bezokuthengisa. Ngakolunye uhlangothi, uhulumeni waseDaily, iziqalo zokuqala kanye nama-tech giants jikelele alawula amathuba amasha ngezinga eliphezulu kakhulu. Ngoba izinhlelo ze-ambitious blockchain ze-Dubai ziyisiqalo senkathi entsha ekuthuthukiseni.
Uhlangothi oluthile olubi ku-cryptocurrency kanye ne-blockchain yizigaba zokuqala zokutholwa. Futhi, izinkampani ezimbalwa ezama ukukhwabanisa amakhasimende. Kodwa lokho kuyobe sekuphelile ngokushesha kunokulindelwe.
Amawebhusayithi Aphezulu Okufaka Isicelo Emisebenzini ku-Cryptocurrency Market - Sebenzisa Namuhla!
Faka isicelo lapha: https://coinmarketcap.com/careers/
I-CoinMarketCap iyi-portal ye-NO1 lapho abantu bangahlola khona izintengo ze-cryptocurrency. Futhi umthombo othembeke kakhulu nonembe kakhulu emhlabeni wabadayisi be-crypto. Kunemisebenzi embalwa onikezwa yona ongaba nayo Ngokwesibonelo:
Ingcweti yesayensi yeDatha
I-Senior Front End Engine Engine
I-SEO ne-Marketing specialist
Le nkampani inezigidi zabantu ngabanye nsuku zonke esiteshini sabo.
Abantu bafuna izinhlangano zomhlaba omusha we-crypto, kanye nesikhulumi sokushintshana esihle kunazo zonke. I-CoinMarketCap nakanjani iyokwenza ukuthuthukisa imisebenzi eningi enikezwayo hhayi kuphela e-US Le nkampani izoletha amanani emakethe akamuva kakhulu nolwazi olusha nge-capitalisations, izintengo, kanye nolwazi lwe-cryptocurrency ezinkampanini zamanye amazwe.
Faka isicelo lapha: https://jobs.bitcoin.com/
I-Bitcoin Inkampani iyinkampani ye-cryptocurrency yomhlaba wonke namahhovisi eTokyo, eSt. Kitts. Ngakolunye uhlangothi, inkampani ikhula ngokushesha kangangokuthi ibe nehhovisi elisha eSweden naseBudapest futhi Mumbai. Ukuzibophezela kwe-Bitcoin ukusabalalisa izindaba zokukhokha zeBitcoin ngokusebenzisa khona jikelele. Ngalokhu engqondweni, zenze isipiliyoni esingenakulinganiswa kwabasebenzi abasha kanye nabantu abazayo ngaphakathi kwebhizinisi.
I-Bitcoins ithumela njalo abasebenzi bayo emhlabeni jikelele. Isibonelo e-Dubai naseNew York City ukuzwa izindawo ezintsha. Bavumele bahlangane abaholi bezezimali embonini, kanye nokusiza abasebenzi abasha ukuya emihlanganweni. Abaphathi beBitcoin balalela njalo abasebenzi abasha futhi bekulangazelela ukukhuluma nabanye. Le nkampani ibuye ixhase imicimbi yomcimbi emhlabeni jikelele. Ngesikhathi ukusebenza i-Bitcoin.com, ungaqiniseka ukuthola amazwe amasha amasha. Futhi-ke, uzoba nokuhlola okusha kwiphasipoti yakho.
Ohlangothini olubi, kanye nonyaka umsebenzi uqhuma inkampani yethu yonke eSt. Kitts. Lapho basebenzisana eduze, bahlangane futhi abaphathi be-UAE. Abaphathi ngaphakathi kwebhizinisi futhi bayathanda ukukhuluma ngemikhiqizo emisha ukuthi bayilungiselelo lokuqalisa. Imisebenzi evelele kakhulu ye-Cryptocurrency Imisebenzi inikezela ngokusebenza manje.
Faka isicelo lapha: https://consensys.net/careers/
I-Ethereum iyi-cryptocurrency yesibili kakhulu ebonakalayo. Ithimba le-Etherum lenza lesi sigaba sokuguquguquka esiletha umqondo "wezivumelwano ezihlakaniphile" kwi-blockchain. Kodwa eminyakeni embalwa elandelayo, bafuna ukuthutha kokunye kokuthatha amandla amancane. Le cryptocurrency kuqala isebenza kuJulayi 2015. Futhi omncane ohlela uhlelo lwe-21 oneminyaka engu-Vitalik Buterin wadala loluhlelo lwe-blockchain.
Sonke sifakazile ukuthi i-Ethereum cryptocurrency isheshe yakhuphuka isuka ekusithekeni yaya kusikhundla sokuhlonishwa kwe-cryptocurrency. Ngezansi kukhona iwebhusayithi ongayifaka isicelo ngomsebenzi ku-Etherum Cryptocurrency.
Faka isicelo lapha: https://ripple.com/company/careers/
Le nkampani inendawo ye-3rd kuhlu lwethu. Abafuna umsebenzi abavela kuwo wonke umhlaba bangafaka izicelo zezikhundla eziningi lapho. Le nkampani isivele isebenza ngemikhiqizo emikhulu efana ne-Santander negramu yeMali, kunokubukeka okungezansi. Le nkampani ngokuqinisekile yiyona ehamba phambili kwimpahla yedijithali yeklasi
Faka isicelo lapha: https://careers.dubaifuture.gov.ae/
Uhlelo oluhlobene noHulumeni lwe-cryptocurrency nobuchwepheshe be-blockchain. Iyaziwa kahle Dubai Future Foundation yasungulwa ngenhloso eqinile yokwakha ikusasa lebhizinisi lobuchwepheshe obusha. Inhlangano yonke ukusebenza nemikhakha yamasu e-United Arab Emirates. Futhi ngokubambisana okuqinisekile nokusebenza kanzima nohulumeni kanye nemikhakha ezimele. Intando sikusize uthole ephakeme kakhulu emsebenzini wakho kanye nezimpumelelo zomsebenzi.
Faka isicelo lapha: https://www.blockgemini.com/careers.html
Enye inkampani yama-Arabhu okumele isebenzele, bafuna ukuqasha abaphathi bokuthuthukiswa kwebhizinisi kanye nokusebenza kwe-cybersecurity. Inkampani inamahhovisi e2 eDubai nehhovisi elilodwa eNdiya. Kufanelekile ukufaka isicelo e-Dubai ngokuqinisekile, noma kunjalo eNdiya kungaba inkokhelo ethandi kakhulu.
Faka isicelo lapha: www.adabsolutions.com
Inkampani yokuxazulula i-Adab iqhutshwa njenge-First Islamic Crypto Exchange (FICE). Inkampani akuyona eyokuqala emhlabeni Sharia-compliant crypto exchange. Empeleni basebenzisana namabhange weSharjah.
Ngaphezu kwalokho, inkampani ihambisana ngokuphelele nomthetho wamaSulumane. Futhi ngokuqinisekile uma ungumuntu wamaSulumane, kufanele faka isicelo senkampani esekwe eDubai njengokukhetha kokuqala emsebenzini wakho. Inkampani enezinhlelo ezinkulu, ngokwesibonelo ifuna ukuqala ukukhipha amathokheni we-Adab. Ngakho-ke, hhayi inkampani enhle kuphela kodwa nekhono elikhulu.
Inkampani iyashukunyiswa kakhulu ukuba bandise usayizi wabo ukwenza amabhizinisi amakhulu esifundeni sase-Middle East. Futhi sonke siyazi ukuthi i-Dubai manje isiyindawo engafinyeleleki yesifundazwe yezimali zamaSulumane. Ukuthola umsebenzi nabo kufanele ubathumele i-imeyili ne-CV yakho.
Faka isicelo lapha: https://www.coinbase.com/careers
Inkampani ye-coinbase ngokuqinisekile ingenye yamapulatifomu amahle kakhulu wokushintshaniswa kwe-cryptocurrency yokushintsha imali ibe yi-cryptocurrency ngokwesibonelo bitcoin neMonero. Ukuphela kohlangothi olubi lwale nkampani. Inkampani enamakhanda eSan Francisco California e-US Ngakho, ukuthola umsebenzi kunzima impela ngenxa yenqubo ye-visa e-United States. Kepha namanje ukuthumela i-CV kuCoinbase kufanele kube ukuhamba kwe-smart.
Inkampani yakwaCoinbase nayo ingenye yezinkampani ezikalwe kakhulu kuGoogle nakuFacebook. Mane nje ngoba beqasha iqembu elimangalisayo lokumaketha.
Faka isicelo lapha: https://bitpay.com/about/team
Ngenkampani yeBitpay uzokwakha ikusasa lokukhokha. Banoba newebhusayithi eyingqayizivele ephethe iphaneli layo futhi kulula kakhulu ukwenza imali evela ku-USD kuya ku-BTC. Ikhamphani ye-BitPay ikwakha ingqalasizinda ngokusekelwe ku-cryptocurrency.
Bakha kakhulu i-platform ye-Bitcoin evulekile yomthombo wamakhasimende nabasebenzisi. Inhloso ukuletha iBitcoin emhlabeni. Ukusiza abantu ngekhadi lebhange le-Bitpay futhi kwenze lokho kwenzeke kakhulu kubhizinisi le-blockchain.
Faka isicelo lapha: https://angel.co/coinswitch-co/jobs
Inkampani yenkampani yenkampani yenkampani yemali isungulwe yiqembu labanjiniyela ikakhulukazi e-India. Basuka e-Amazon, i-Microsoft, ne-Zynga nje ukwakha i-worlds best kanye ne-fastptocurrency yesikhulumi sokushintshanisa esheshayo ukusebenza kanye ne-100% enikezwe ubuchwepheshe be-blockchain.
I-Coin Switch inikeza amazinga angcono kakhulu okushintshanisa emakethe ye-crypto, akwazi ukwenza lokho ngokuhlanganisa zonke izinkampani ezihamba phambili zokuhwebelana.
Futhi banesistimu enhle yezinkokhelo futhi ubaqhathanise ngesikhathi sangempela kwezinye izinkampani uhlamvu lwemali ngenye yezindlela ezinhle kakhulu. Kodwa-ke, abanayo ikhasi lomsebenzi kepha ungafaka isicelo kuwebhusayithi ye-Angel.co. Le nkampani isekela ngaphezulu kwe-250 cryptocurrensets kanye nangaphezulu kuka-45,000 ngababili. Ngakho-ke kuzoba nezikhundla eziningi ezintsha eminyakeni elandelayo.
Faka isicelo lapha: https://www.careers.coinmama.com
Ipulatifomu yokushintshaniswa kweCoinmama cryptocur lwemali yinkampani entsha futhi ekhula ngokushesha. Le nhlangano iba yinkampani yokuqala eyaziwayo yakwa-Israyeli. Futhi nakanjani, selokhu basungula le nkundla yokushintshana nge-cryptocurrency ku-2013 futhi itholakala eRa'anana. Yiba yinkampani ekalwe kakhulu. Uma uqala umsebenzi we-blockchain kanye nesipiliyoni sokuhweba nge-crypto-currency uzokwazi ukuthi lithandwa kangakanani leli bhizinisi.
I-Coinmama enikeza izixazululo kumakhasimende emazweni angaphezu kwe-182. Futhi, ungasebenza kubo kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni. Le nhlangano inikezela ngezinsizakalo zokushintshana ngezinsizakalo zokushintshana okusheshayo, okusebenzayo nokuvikelekile kakhulu.
Faka isicelo lapha: https://www.cointiger.com/en-us/#/recruit
Coin tiger kuyamangalisa ipulatifomu yokushintshanisa kwemali ye-cryptocurrency ngendlela esheshayo. Inkampani yakwaCoinTiger izimisele ukudala insiza ye-blockchain ephezulu. Isibonelo, banokuxhaswa kwezingxoxo eziku-inthanethi kanye nenkundla ephezulu ukuhlinzeka abasebenzisi ngolwazi oluphelele lokuhweba ngobuchwepheshe be-blockchain.
I-Coin tiger yinhlangano yokukhula okusheshayo futhi uma unesifiso embonini ye-blockchain futhi unamakhono afanele unganikezwa imisebenzi kusuka kubo lokho nakanjani.
Faka isicelo lapha: https://www.luno.com/en/careers
ILeno ingenye Inkampani enhle futhi baqasha abantu abangaphezulu kwamakhulu emhlabeni jikelele. Okwamanje bathola izikhala zomsebenzi eCape Town, London naseSingapore. Nakanjani ukuthola umsebenzi nale nkampani kuzoba ngenye yezinqumo ezinhle emsebenzini wakho.
Njengesikhulumi sokushintshanisa i-cryptocurrency basiza abantu ukuthi baqonde i-Cryptocurrencies efana ne-Bitcoin ne-Ethereum, i-Monero futhi bashintsha ngokushesha isimo sezimali emhlabeni wonke.
Uma ufuna umsebenzi futhi ukholelwa amandla okuhlukahluka kwemakethe ye-blockchain. Ungakha futhi udale ukusebenzisana okusha, nokufuna okuqhubekayo kokuhle.
Faka isicelo lapha: https://jobs.lever.co/bitpanda
IBitpanda ibuye yabalwa phakathi kwamapulatifomu okushintshaniswa kwemali ephezulu ye-cryptocurrency. Kuze kube manje inkampani iqasha e-Austria e-European Union. Ngakho-ke ukuthola umsebenzi nale nkampani kufanele ufake isicelo se-visa noma udlulise inqubo yokuxoxisana nokuthola i-visa yokuxhaswa.
IBitpanda nakanjani iyindawo ehamba phambili ethengisa ukuhweba evakashele kunazo zonke e-Europe. Abantu abavela kuwo wonke umhlaba bathenga futhi bathengise i-Bitcoin, i-Ethereum, i-IOTA nokuningi. Le nkampani yi-Fast, ephephile ne-24 / 7 inkampani yamazwe omhlaba ngomsebenzi.
Faka isicelo lapha: https://careers.plus500.com/
Enye yeMishini ye-Crystal endala kunazo zonke emhlabeni. Ukuphathwa kusuka kwa-Israyeli ngakho, nakanjani inkampani kufanelekile ukubanikeza ithuba lentuthuko. Le nkampani ibixhaswe nge2013 futhi isivele inesigaba sayo eLondon stock stock. Kufanele nakanjani uzibhekele website yezemisebenzi ngoba bavuselela imisebenzi eminingi emisha ayinikezeli e-UK kuphela
Faka isicelo lapha: https://jobs.lever.co/kraken
UKaren yinkampani eyenzelwe abantu abasha abasebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain. Ukusebenza ngeKraken muhle nje. Enye yezici ezinhle ukuqasha ukude. Ngakho-ke, ungasebenza eTokyo, Dubai naseLondon. Izimpahla Zedijithali nesethi nephothifoliyo yamakhasimende. Nakanjani ukukubonisa lokho uzothola ithuba lomsebenzi omude.
Elinye iphuzu elihle ukuthi ibhizinisi leKraken crypto likhula kakhulu kuma media social. Babheke kakhulu abafuna umsebenzi omusha ngamakhono amancane wezobuchwepheshe. Ngakho-ke, ukumaketha nokuthengisa engxoxweni ebukhoma kuhlala kwenza izinzwa.
Faka isicelo lapha: https://shapeshift.io/careers
I-ShapeShift akuyona kuphela iplatifomu yemali ye-cryptocur lwemali. Zi-Platform Zempahla Engadingeki ZaseDijithali eziholayo. Abantu emhlabeni wonke basebenzisa idatha yabo namathuluzi ukwakha ipulatifomu yabo yemali. Ku-2014, i-ShapeShift bacishe baba yiphayona lenkathi entsha zezimali zedijithali nedatha ye-cryptocurrency. I-ShapeShift yinkampani enhle kakhulu kubaphathi bebhizinisi be-IT, abahleli bekhompyutha nabathuthukisi bobuchwepheshe.
Faka isicelo lapha: https://jobs.cointelegraph.com/
Manje banezingxenye ezintsha, imisebenzi nge-coin telegraph. Ungafaka isicelo semisebenzi eyizinkulungwane ezifundeni eziningana. Futhi uma ufuna ukuthola imisebenzi enentshisekelo, kufanele ufake isicelo engxenyeni yabo yewebhusayithi. Le nkampani ngaphambi kokuphatha kuphela ukwenza izindatshana ngokuhweba nge-crypto, pizindaba ezivusayo kanye nemininingwane yakamuva evumela abafuna umsebenzi ukuthi bafake izicelo ngemisebenzi engcono kakhulu endaweni yobuchwepheshe be-blockchain.
Manje usungasebenzisa isiteji sabo esiyingqayizivele. Thola izikhala zemisebenzi ezihlobene ne-crypto ezihlobene emakethe ye-crypto. Ungakwenza zihambisane nohlu lwamathuba wemisebenzi ngaphakathi kwebhizinisi le-blockchain. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo ezinhle kakhulu zezimboni ze-fintech ne-crypto ukuthumela imisebenzi kwiwebhusayithi yabo.
Faka isicelo lapha: https://request.network
Le nkampani isimanga nje, futhi ivula imakethe ejwayelekile ibe into entsha. Inethiwekhi eceliwe ibonakala njengekusasa lebhizinisi le-e-commerce. Ikhamphani iqondisa kwinethiwekhi ehloniphekile yezicelo zokukhokha futhi yenza lokho kufinyeleleke kakhulu kubasebenzisi abasha be-intanethi.
Faka isicelo lapha: https://localbitcoins.com/careers
I-LocalBitcoins.com iyinkampani enhle yongoti abahamba phambili be-IT IT. Ngoba ivumela abantu abasha ukushintshanisa umbono wabo eceleni kombono wenkampani nokwakheka kwayo. Le nkampani, ngakolunye uhlangothi, isebenza emakethe yamakhompiyutha endawo kanye nobuchwepheshe beBitcoin block.
Amadokini asekhaya asezinsizakalo eziningi. Izama ukubuyela emuva ngobuchwepheshe be-blockchain ubuchwepheshe kuwo wonke umhlaba. Le nsizakalo yenkampani ingenye yezisekelo zomnotho weBitcoin.
Uma sithatha le nkampani futhi siqhathanisa nabanye sizokwazi ukuthi i-LocalBitcoins.com yasungulwa ku-2012 futhi namuhla uthola ukubhaliswa okusha kwe-4000-5000 nsuku zonke. lokho kusinika umshuwalense wokuthi ukuqhubeka komsebenzi kuzoqhubeka ngokuzayo.
Faka isicelo lapha: https://www.gemini.com
I-Gemini Crypto Exchange iyindawo yokushintshana esemthethweni eseNew York, e-US. Futhi okuningi ama-stockbrokers asebenza lapho vele.
Kodwa-ke, i-Gemini ithengisa kuphela ama-cryptocurrencies e-United States. Kusuka kumadola aseMelika, iBitcoin ne-Ethereum. Ngakho-ke ngokusebenza kule nkampani mhlawumbe, kufanele ube no visa ukuze inkampani yase-US okwamanje Ukuqasha abaphathi, imakethe kubaqondisi, abaphathi bemikhiqizo nonjiniyela.
Idatha yamafa we-Digital
Faka isicelo lapha: https://www.binance.com/Careers.html
Le ngosi nayo ihlinzeka ngokuhlinzekwa kahle komsebenzi kulabo abafuna umsebenzi. Abaphathi benkampani banokubuyekezwa okulinganisa okuphezulu kakhulu. Vele ngoba baphinda babumba ivolumu yokuhweba kuma-cryptocurrency abo ambalwa okuhweba. I-Biance yinkampani enesifiso sokusebenzisana nayo.
Inkampani inomsebenzi omningi wokuphila nokulingana futhi ngokuqinisekile ngenkathi usebenzela i-biance ungaphakanyiswa. Futhi-ke, le nkampani inenqwaba yezinhlamvu zemali etholakalayo yokuthenga kumakhasimende abo. Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, uma wazi ama-bitcoins amahle kakhulu kanye nemakethe yeMonero noma ye-Etherum crypto. Kumele nakanjani zama ukuthola umsebenzi nale nkampani.
Faka isicelo lapha: https://lightning.engineering/careers.html
Ikhamphani yeLibani yeLibani ikhiwe yiqembu labanjiniyela abanesithakazelo nge-cryptography kanye ne-cryptocurrency ngokugunyazwa kwemisebenzi kanye nokuvikeleka nobumfihlo. Imisebenzi yabanjiniyela bezinhlelo zesofthiwe abanolwazi ngokusebenzisa isipiliyoni se-cryptography ebuchwepheshe bezwe.
Le nkampani ilwa nama-cypherpunks futhi izama ukuletha ukujula kokuziphatha kanye nokuqagela kwebhizinisi. Ngakho-ke, uma ungathanda ukusebenza nohlobo lwenkampani yezokuphepha emakethe ye-blockchain, sicela ubheke ukubukwa kuwebhusayithi yabo futhi zisebenza ezikhundleni ezitholakala kwiwebhusayithi yazo.
Faka isicelo lapha: https://international.bittrex.com/
I-Bittrex iyaqasha okwamanje ukuthi inezinhlinzeko zemisebenzi ye-10. Ukunikezwa kwemisebenzi kuhluke kakhulu kumhlaziyi wezokuthuthukiswa kwezebhizinisi kuya kuMphathi Wezezimali Oyinhloko.
Inkampani iyaqasha okwamanje e-United States of America. Ngakho-ke, kungase kube nzima ukufika lapho ngaphandle kokuba ube nolwazi oluhle emkhakheni we-blockchain kanye nezezimali.
Faka isicelo lapha: www.komodoplatform.com
Inkampani yeKomodo manje nayo iqasha abantu njengamanje abaqasha izikhundla eziningi. Basesezinhlelweni zokuqala zokuthuthuka kwebhizinisi. Kepha uma ungaboni isikhundla esivulekile esifanelana nesipiliyoni sakho kuwebhusayithi yabo. Kufanele uthumele i-CV yakho uma ucabanga ukuthi unamakhono abalulekile okunikeza iqembu labo.
Faka isicelo lapha: https://www.simplex.com/join-us/
Inkampani elwa nenkohliso. Inkampani yakwa-Simplex yaziwa kakhulu njengendlela esheshayo yokushintsha i-cryptocurrency. Ukuphathwa kwale nkampani kungaphezu kokuqonda. Ukukhetha kwabo okokuqala kwakuhlanganisa ukuhlanganisa izimboni ezintathu ezikhulayo ze-e-commerce, inkohliso nokuphepha ohlelweni lobuchwepheshe lwe-blockchain.
Ziphefumulelwe ngumbono we-bitcoin no-Etherum oguqula izwe lokucubungula ukukhokhela okungcono (futhi okuphephile). Ngakho, sebenzisa kwiwebhusayithi yabo. Ngethemba ukuthi uzoba ne-replay evela kule nkampani.
Faka isicelo lapha: https://kufun-limited.breezy.hr/
I-Ku Coin ilula nje i-Bitcoin nezinye izigcawu ezimbalwa zokushintshaniswa kwe-cryptocurrency. Banokuphakama okukhulu kokuthengiselana nawo wonke amamoza basebenzela abasebenzi babo kahle.
I-Ku Coin yinkampani lapho ungasebenza khona ukude. Ngakho-ke, nakanjani kuhle kubasebenzi bamanye amazwe ngaphandle kwe-visa. Bheka iwebhusayithi yabo bese ufaka isicelo semisebenzi ethokozisayo enikezwayo.
Faka isicelo lapha: https://www.bitwala.com/careers/
Baqasha abantu abaningi futhi baqhamuka eJalimane. Ungenza iphupho lakho lifezeke noBitwala. Ungasungula kabusha imali yasebhange kanye nethimba labo elimangalisayo lochwepheshe. Izinsizakalo ezimangalisayo ezinikezwa yinkampani yazo zibaholela emazingeni aphezulu kakhulu. Enye yezibonelo yi-akhawunti yakho yasebhange eJalimane nekhadi lokudonswa kwemali kanye nalokho.
Faka isicelo lapha: https://bitoasis.net/en/front/career/
Inkampani yeBit Oasis esiza abafuna umsebenzi ukujoyina uhlobo olusha lomhlaba we-cryptocurrency. Uma unentshisekelo bitcoin noma enye imali. Ngaphezu kwalokho, uma ujabule ngamathuba emakethe ye-blockchain evelayo. I-Bitoasis kuyinkampani enhle ukusebenza ngaphakathi kwe-UAE.
IBit Oasis iyaqasha eDubai nase-Abu Dhabi. Ungafaka isandla nale nkampani kumaphrojekthi ambalwa weBitcoin eDubai. Kepha ngaphambi kokuthi uqhubeke, qiniseka ukuthi unephrofayli yeGitHub emangalisayo. Futhi-ke, i-Linkedin ikhombe ku-Cryptocurrency. Iphuzu elihle kakhulu nale nkampani ukuthi indawo ayinandaba nabo ngokuya ngokuqashwa. Isidingo kuphela amakhono akho amahle nesipiliyoni.
Faka isicelo lapha: www.loyal.com/careers
Ipulatifomu yeLoyyal ingenye yokuqalwa okususelwa esisekelweni saseDubai. Futhi inkampani iyindlela ephakathi yokukhula ngokushesha-based blockchain-based yayo Ubuchwepheshe be-Dubai.
Inkampani ehloniphekile igxile ekwenzeni i-world yokwethembeka izinhlelo ezinhlelweni zobuchwepheshe be-blockchain. Ngaphezu kwalokho, sebevele basebenzisana namafemu aphezulu akwa-Fortune 500 (njenge-IBM noDeitte) njengamaklayenti.
Faka isicelo lapha: https://cobinhood.com/careers/
Inkampani enhle kakhulu ongayisebenzela futhi baneqembu elinamakhono ochwepheshe. Okwamanje inkampani ifuna abaphathi be-IT kanye nabaphathi bezinhlelo abanamakhono. Ngaphezu kwalokho, inkampani ivulelwe ukuphuma futhi ngifuna ngempela ukugcwalisa izikhala ezintsha ngaphakathi kwendlu.
Faka isicelo lapha: https://0xcert.org/jobs
Inkampani enentshisekelo kakhulu ivela eYurophu. Ithimba eliyinhloko lenkampani liseSlovenia. Ngakho, ezimweni eziningi, kumele ube nePasipoti YaseYurophu. Kodwa ukuphathwa kwalenkampani kuqonda ukuthi abantu abanekhono futhi abanamandla kakhulu ukuhlala phesheya isibonelo uma uvela ePakistan noma eNdiya ungaba nomsebenzi nabo. Yiqiniso, amanye amazwe nawo acatshangwa, umsebenzi ode kakhulu ungaphezu kwakho.
Faka isicelo lapha: www.leewayhertz.com/careers/
Siyinkampani ekhula ngokushesha yezicelo zokwenziwa kwamaselula eyasungulwa e-2007 futhi yatholwa eSan Francisco, namahhovisi e-satellite e-Irvine, eChicago naseNew Delhi. Iqembu lethu liqukethe abaklami abawine imiklomelo kanye nabathuthukisi abanamakhono abakha kahle ikhwalithi ephezulu yebhizinisi izinhlelo zokusebenza. Siyaziqhenya ngokwazi ukuletha ukulethwa okuhle nokuqondile komsebenzisi. Sihlelile, sathuthukisa, futhi sahambisa izinhlelo zokusebenza zeselula ze400, futhi lokho kumane nje kuyisiqalo sendaba yethu: amaphupho ethu makhulu.
Faka isicelo lapha: www.nemjobs.com
Blockchain ubuchwepheshe bunikeza indlela ehlelwe ngokuyisisekelo yokulondolozela i-ledger ephephile yokushintshanisa kuqhathaniswa nedatha yendabuko. Le nkampani inemisebenzi eminingi enikelwa ngamalungu angafundile kangako. Unganikezwa imisebenzi eyisisekelo, kungcono kunalutho.
I-IBC International Blockchain Consulting
Faka isicelo lapha: www.ibcgroup.io
Enye inkampani enhle ukusebenza njengesisebenzi. Ngale nhlangano, nakanjani uzokhulisa isilinganiso sempumelelo yohlelo lokusebenza emakethe ye-cryptocurrencies. Kepha, kukhona uhlangothi olubi, kuzodingeka ukuthi uholele ekufunweni okukhulu kwemisebenzi yemisebenzi ye-cryptocurrency nomsebenzi ohlobene nokufinyeleleka kwe-blockchain career. IBC babe namathuba emisebenzi ngokuyisisekelo kubo bonke abafuna umsebenzi abavela kuwo wonke umhlaba. Futhi-ke, ngaphakathi kwensimu ye-cryptocurrency kanye nemakethe ekhulayo, izisebenzi eziningi ezintsha zizokwenziwa ukude kule nkundla. Zama uku Faka isicelo futhi uzothola nethuba lomsebenzi kubhokisi lokungenayo le-imeyili.
Faka isicelo lapha: https://wachsman.com/careers/
Enye indikimba yemali ebiza ukunakwa. EWachsman, ungaba nezinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi enikezwayo. Ithimba labaphathi benkampani limelela izinkampani ezihola phambili nge-blockchain kanye nemvelo ye-cryptocurrency. Le nkampani iqasha ngezinga elikhulu eMelika, eYurophu nase-Asia, eSingapore.
Le nkampani ikhula ngokungeziwe futhi ukunikezwa kwemisebenzi ngaphezulu kwe-30 kubekwe muva nje. Bafuna ngenkuthalo abasunguli benhliziyo abanolwazi ebhizinisini le-blockchain. Ngakho-ke, uma ungumuntu ohlakaniphe kakhulu futhi ngifuna amathuba wokuthola imisebenzi othatha ubungozi. Kufanele usebenzise i-CV yakho futhi ube ngomunye wabaholi abazimisele ngenkampani yakwaWachman bese ujoyina inkampani yabo.
I-Chamber of Digital Commerce
Faka isicelo lapha: https://digitalchamber.org/careers/
I-Chamber of Digital Commerce yinkampani enentshisekelo kakhulu ngoba ayikho ukuhweba i-crypto. Bangaphezulu kweqembu le-blockchain lobambezeli ekamelweni eliphezulu le-Digital Commerce! Isithakazelo esiqinile kakhulu ukusebenza uma usekelwe e-US
IChamber of Digital Commerce inezindawo ezivulekele izitshudeni zasekolishi nabathola iziqu ukubamba iqhaza kumdlalo omusha we-career ehhovisi labo laseWashington, DC. Inkampani okuyiyo kuphela esiyithole ukuthi inezinhlelo ze-Internship.
Faka isicelo lapha: https://bitflyer.com/en-jp/recruit/
IBitFlyer yinkampani enentshisekelo nezinombolo. Ilungu lebhodi labaphathi kuzohlanganisa abantu nesipiliyoni ebhizinisini. Abasebenzi babo bavela kwizizinda eziningi ezahlukahlukene kanye nobuzwe ngenani elikhulu lobuciko. Baqasha eTokyo futhi muva nje bathuthele ehhovisi labo elisha lapho bezothola khona abantu abaningi abangasebenza nabo.
Inkampani yeBitFlyer yokuba imisebenzi eminingi emisha inikeza cishe noma yimuphi umuntu ofanelekayo. Ukusuka kubaholi bezinkampani kuze kube yizisebenzi ezijwayelekile emnyangweni wezentengiso.
Faka isicelo lapha: www.boscoin.io
Ikusasa le-blockchain lilapha. Uhlamvu lweBos lushintsha imakethe yonke ukuze lube nohlelo olungcono. Umnyombo wekusasa yiBOScoin. Inkampani isiza abasebenzisi kubuchwepheshe be-blockchain. Bafuna abafuna inselelo futhi ukuhlanganyela kulokhu okuhlangenwe nakho okumangalisayo ndawonye!. Ngakho-ke, zibheke kuwebhusayithi ye-boscoin bese uthola okunikezwa umsebenzi kubo.
Faka isicelo lapha: https://www.huobigroup.com/en-us/jobs/
Iqembu le-Huobi liqasha abantu abaningi. Le nkampani ingathatha abasebenzi bamazwe omhlaba bayise eSingapore noma eLondon. Ngakho-ke, nakanjani, le nkampani ifanelwe yimali yokuthola imisebenzi ye-cryptocurrency. Joyina uHuobi kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni. Hlanganisa imakethe yomhlaba wonke futhi ulethe inani lomhlaba. Le femu ngokuqinisekileyo iphendula zonke izidingo zabahambi abafuna ukubukwa.
Faka isicelo lapha: https://www.atomintl.com/careers
Inkampani entsha eHong Kong. Kepha kukhula kahle kakhulu ku-inthanethi. Le nkampani isivele ibonile ukuthi kungaba khona amandla atholakalayo kwabasebenzi. I-Atom Group iyazi ukuthi ichibi elibanzi lethalente labathengisi bomhlaba lizobasiza bafinyelele kwelitshe ngokushesha okukhulu. Futhi acebile ukuxubana kwamasiko kusuka e-Asia futhi iYurophu izovumela inkampani ukuthi ikhuphuke futhi yenze ikusasa. Umsebenzi we-Atom Group uzoba isiqalo esihle kwimisebenzi yase-Asia ye-cryptocurrency kanye nokuzuzwa okuphezulu komuntu.
Faka isicelo lapha: https://www.okex.com/pages/company/recruit.html
Le nkampani okwamanje ifuna abantu abahlobene ne-technical kanye nabaphathi bokusebenza. Kepha kusenenkampani enhle osebenzisana nayo. Omunye wemisebenzi ekhokhelwa kahle ngu-Senior C ++ Development Engineer kanye noMphathi Omkhulu Womkhiqizo. Ukuchofoza okukodwa kwe-CV ngakho kufanele kube njalo inketho eshesha kakhulu futhi enhle yabafuna umsebenzi abasha.
Faka isicelo lapha: https://makerdao.com/careers/
Inkampani yenkampani iyazi ukuthi ingakwazi kanjani ukubona imakethe ye-blockchain. Amabhodi omqondisi ale nhlangano afuna abantu abanekhono nabanolwazi cishe cishe kunoma iyiphi indawo emhlabeni. Abantu baseChina, eDenmark nase-US basebenza ndawonye.
Kufanele uzame ukujoyina ithimba lomenzi ngoba ithimba labo lizokusiza ukwakha ukuthuthuka komsebenzi okumangalisayo. Layisha i-CV yakho bese uqala ukufuna ubufakazi kanye nenkampani yabo ehlukile. Indlela engcono kakhulu yokufika lapho kufanele ibe nerekhodi ehlanzekile futhi ulandele ukuqhubekela phambili kokuphumelela.
Faka isicelo lapha: https://www.globalcap.com/jobs/
Ikamu lezwe lonke liye lakwazi ukukhipha ukulingana kokuqala komhlaba ngaphansi kokulawulwa okuphelele okulawulwayo. Le nkampani iphinde isekelwe eLondon City futhi ngokuqinisekile ingenye yezinkampani ezinentshisekelo yokutshala imali emhlabeni.
Ngibonga iqembu le-Global cap nabatshalizimali babo futhi bonke abasekeli babo. I-Global cap iba yinkampani enhle futhi ethandwayo eYurophu. Abaphathi bale nkampani bayaphatha ukuthola ingqophamlando ekudalekeni kwezimakethe zezezimali. Ngakho-ke, nabo, uzokwazi ukufunda ukuthi ungatshala imali kanjani emhlabeni wonkana.
Faka isicelo lapha: https://appliedblockchain.com/join
Joyina ibhizinisi le-Applied Blockchain eLondon. Le nhlangano iqasha amakhulu amaningana eLondon City nasePorto. Ngokuqinisekile, bangenye inkampani efanelekile ukuthola i-interview.
Ngakho, uma ufuna ukuqashwa okuhle emazweni aphesheya enkampanini ye-blockchain kufanele uthumele i-CV kubo ikakhulukazi uma unolwazi olunzulu kumibuzo wokufaka amakhodi ne-Js. Bafuna ngokuqhubekayo abantu abagqugquzelwa kakhulu abanezisulu ezinhle ze-IT. Ngaphezu kwalokho, abantu baseLondon abazimisele ngokufisa ukuletha ibhizinisi lobuchwepheshe be-blockchain.
Isiphequluli sewebhu esinesibindi
Faka isicelo lapha: https://brave.com/jobs/
Sibindile inkampani yesiphequluli se-intanethi engasindisi idatha yakho futhi isheshe kakhulu kunezinye iziphequluli kuphela. Abanakho i-ICO noma ibhizinisi elihlobene ne-cryptocurrency. Kodwa baqasha abantu abanokuhlangenwe nakho okufanayo kakhulu ebhizinisini le-cryptocurrency. Isiphequluli esinamandla sibasiza nokuba nezikhungo zokufundela ezifana ne-PhD.
Ngakho-ke, bheka imininingwane yenkampani yabo futhi zama ukufaka isicelo sesikhundla esihle nabo. I-Brave ejwayelekile ekhuluma ifuna abantu abanamakhono wezobuchwepheshe njengoba besebenza ebhizinisini le-inthanethi.
Faka isicelo lapha: www.solve.care.com
Inkampani yase-Estonia enekhwalithi ephezulu yebhizinisi. Banamathuba amaningi emisebenzi, isibonelo, umeluleki UI / UX kanye nomakhi wewebhusayithi. Banokuqashwa kwe-akhawunti eYurophu okwamanje kodwa ithuba lemisebenzi kusuka kuwebhusayithi yabo libukeka lilihle kakhulu.
Ngokuvamile, uMsizi Ophethe ku CEO futhi umphathi we-Sr.development noma injineli kubukeka sengathi ukunyakaza okuhle kakhulu ngaphakathi kwebhizinisi le-crypto. Yebo, zama inhlanhla yakho nomqashi, indlela elula kakhulu yokuthumela i-curriculum vitae yakho evuselelwe.
Faka isicelo lapha: https://www.huobi.com/careers/
Enye inkampani evela eSan Francisco, e-US Huobi nayo idluliselwa phambili nayo amathuba amaningi emisebenzi. Le nkampani yazibiza ngeHBUS Holdco Inc. Futhi yibhizinisi elihlobene nobuchwepheshe be-blockchain ne-cryptocurrency. Le nhlangano isebenza ngokuphelele phakathi kwezimakethe zobuchwepheshe nabaphathi bezimali. Bakulungele ukunikela ngemikhiqizo nezinsizakalo kumakhasimende abo futhi ilungele ukuqasha abathengisi abaningi abavela kuwo wonke umhlaba.
Njengasezindaweni zaseMelika, izikhungo zezimali ezilawulwa ngokugcwele. Inkampani enokuxhumana okuziqhenya esifundeni esihle kakhulu eSilicon Valley. Ngaphezu kwalokho, ukuthatha izingqondo zokudala emabhizinisini e-crypto, ukukhuluma ngokuvamile, emisha emisha nokucabanga okungavumelani kwenza le nkampani ibe nesimo esiphakeme e-US
Amanye amawebhusayithi e-Cryptocurrency ungazama inhlanhla nawo
Faka isicelo lapha: https://zilliqa.com/careers.html
Le nkampani ye-cryptocurrency Esebenza kuZilliqa izoba yinzuzo enkulu ebhizinisini le-blockchain. Ungabasiza ukuba bakhe uphawu lweZillinqa emhlabeni jikelele.
Ngale nkampani, uzokwakha ibhizinisi lesizukulwane esilandelayo. Futhi ukungena okuphezulu ngaphakathi kwamapulatifomu e-blockchain emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, le nkampani kufanelekile ukunika amandla ithuba lomsebenzi omusha ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza ezinikezwe nezinhlobo zamaphrojekthi we-cryptocurrency.
Lokhu kwe-cryptocurrency kungokwenkampani yeBitro, noma kunjalo, banehlukaniso iwebhusayithi lapho ungafunda khona okuncane ngaphambi kokufaka isicelo semisebenzi ye-cryptocurrency. Imali ye-Bitcoin enenani elihle kuyo yonke indawo uhlamvu lwemakethe yamasheya futhi abaningi abatshalizimali abatsha bathola izingcezu zolwazi kusuka lapho.
Faka isicelo lapha: https://www.stellar.org/
Lolu hlelo lokuthuthukisa i-crypto olusiza abantu ukuthi bashintshe impilo yabo. Babhekile for expats abagqugquzelekile ukujoyina iqembu labo elikhulayo. Ngakho-ke, ubheke kuwebhusayithi yabo futhi usize ukuguqula umhlaba wezinkokhelo!
Faka isicelo lapha: https://eos.io/
I-EOS cryptocurrency iyaziqhenya kakhulu ngethalente labo eliyingqayizivele. Imisebenzi eminingi ingathathwa kule nhlangano. Abafuna umsebenzi bangazikhetha kwizikhala zomsebenzi, abaqambi, abaphathi be-SEO, abathuthukisi bewebhu ukusekela abasebenzi, ngisho nabathuthukisi abaphezulu. Ngoba wonke amaqembu abo enza kahle kuyo yonke inkambu.
I-EOS ukuqasha ukuthumela kwamazwe ngamazwe.
La maqembu enkampani asuselwe ezindaweni eziningi emhlabeni jikelele, India, Pakistan, US nase Canada Ngokwesibonelo. Abantu bangavela impela kunoma yiliphi izwe abangahlobene ngisho nebhizinisi le-blockchain. Ngakho-ke, ukuthola umsebenzi nabo kubonisa inkampani yabo njengenhlangano yomhlaba wonke yangempela.
Faka isicelo lapha: https://www.iota.org
Iota kungenye i-cryptocurrency abantu abathengisa ngayo emazweni aphesheya. Ayidume kakhulu futhi ayisuselwa egameni kodwa ifakwe kahle emakethe yemali. Okwamanje abaqashi. Kepha kuyinkampani enhle ukuthola umsebenzi. Uyakufanelekela ukubukwa okujulile ngoba le nkampani ikhula ngokuningana emakethe ye-crypto.
U-IOTA unesithakazelo esiqinisekisayo ngenkathi benesimo se-14th ku-coin yemakethe yamakethe. IOTA inkampani izenze izinhlelo zokuphatha kanye namafajithali ngokusebenzisa izivumelwano ezihlakaniphile. Basebenzisa inethiwekhi ehlukanisiwe, ihlose ukudala "i-Smart Blockchain Economy".
Faka isicelo lapha: https://www.circle.com/en/usdc
I-USD lwemali kungenye inkampani yemali enohlamvu lwemali edijithali. I-USD Coin Uhlamvu lwemali oluzinze laseMelika. Iphrojekthi enhle ye-cryptocurrency ukuthola umsebenzi. Okwamanje abaqashi abantu. Kepha kufanelekile ukuthola inkulumo emfushane nabo. I-USD Coin iyipulatifomu yokushintshana ye-crypto-kuphela. I-USDC ibhuloho phakathi kwamadola nokuhweba. Futhi nakanjani ukusebenza kahle kakhulu ngokuya nge-cryptocurrency kanye ne-blockchain technology.
Futhi kulabo abashintshanisa izinkampani kanye nobuchwepheshe basekhaya base-Us basamukela kakade ama-fiat, basiza ukusebenza nge-crypto ibhizinisi.
Faka isicelo lapha: https://z.cash
I-Z Cash ingenye enye inkampani enhle okufanele ibukeke futhi ikhule inhlangano yezobuchwepheshe be-blockchain. Inkampani eyimfihlo ngokugcwele yokuhweba nokuqina okuhle ukwenza umthelela. kufanele nakanjani uzame ukuphatha othintana nalo nkampani.
I-Zcash yayingu athuthukile futhi yethulwa ngabakwa-cryptographers abaphezulu ku-2016. Ngakho-ke, ngalolu hlobo lwebhizinisi nakanjani kufanele ube nokubukeka.
Le nhlangano eyisisekelo senkambiso esekwe ocwaningweni lososayensi abavela eMIT, Technion. Kanye noJohns Hopkins, iTel Aviv University kanye ne-UC Berkeley. Leyo ukunika abantu indlela ethile yokusebenza.
Faka isicelo lapha: https://www.dash.org
Inkampani yedeshi ingenye i-digitalcurrency yedijithali. Ngokuqinisekile, ungasebenzisa lezi zinhlamvu zemali ze-crypto ukwenza izinkokhelo zangasese online. Inkampani ye-Dash ingena kumapulatifomu wokushintshiselana nge-cryptocurrency. Le nkampani iyakufanelekela ukuthola umsebenzi futhi nakanjani ingokunye okuhle futhi khula kahle emakethe engaphezu kwe-cryptocurrency. Inkampani ihamba kahle kunethiwekhi elandelayo ye-P2P.
Faka isicelo lapha: https://neo.org
I-Neo Smart cryptocurrency kungenye inkampani enhle. UNeo udala indawo enhle kakhulu yemali ye-crypto kanye neyedijithali. Inkampani yethu ikusiza futhi ukufinyelela le nkampani. Bayinkampani enhle enama-logo amangalisayo owakha umnotho ohlakaniphile. Inkampani ye-NEO yiphrojekthi ye-blockchain engenzi inzuzo yomphakathi. Elinye iphuzu nabo ukuthi asetshenziswa blockchain ubuchwepheshe kanye nobunikazi bedijithali ukushicilela amafa emakethe emakethe yamakhompiyutha.
Faka isicelo lapha: https://tezos.com/
I-Tezos iyipulatifomu entsha ebhizinisini le-blockchain lezinkontileka ezihlakaniphile nezinhlelo zokusebenza ezihlukanisiwe. Ipulatifomu enhle ukubheka imisebenzi kungekudala. Okwamanje inkampani ayiziqashi ngenxa yenqubo yokuqala yokuthuthuka. Kepha nakanjani, iTezos iyi-blockchain engaziveza ngokwayo ngokwayo.
Ababambiqhaza nabaninimabhizinisi futhi ngokuqinisekile abatshalizimali sebekwazile ukuvotela izichibiyelo lo mbono omangalisayo. Enye yezinkampani ezinhle enobuchwepheshe obuhle nesipiliyoni sedijithali.
Faka isicelo lapha: https://dogecoin.com/
IDogecoin inganekwane ehlukanisiwe, imali yontanga-kuya-kontanga. Ngokuvamile, le mali iqala njengehlaya ku-Intanethi. Kodwa abanikazi basheshe babone ukuthi lokhu kungaba ngumqondo omuhle ukuqala.
IDogecoin iwebhusayithi enhle futhi enesikhundla esiqinile ku-coin emakethe cap. Le sevisi yenkampani ikuvumela ukuthi uthumele kalula imali online. Yicabange “njengemali ye-inthanethi.” Futhi uzothola umthombo omuhle wolwazi oluhle mayelana naleli bhizinisi le-block chain.
Faka isicelo lapha: https://wavesplatform.com/
Amagagasi ayinkokhelo kanye nesipulatifomu abaphatha imali enhle ngokwe-cryptocurrency. Futhi le nkampani ayifaki imiphumela ngokuqinisekile. Uhlamvu lwemagagasi lugcina ithrekhi yomakethe omusha wedijithali.
Izinhlamvu zemali ze-Waves ziba yingxenye yamapulatifomu akhula ngokushesha kakhulu e-crypto worlds. Le nkampani ayenzi kuphela uhlamvu lwemali kodwa futhi ukuphatha kahle kakhulu ukudala imali ehambisanayo yemali amakhasimende abo.
Faka isicelo lapha: https://www.trusttoken.com/careers.html
I-TrustToken's empeleni yinkampani enombono omuhle. Futhi banayo iwebhusayithi yomsebenzi. Basekele insiza yokususa inkululeko yezimali ezweni le-blockchain ngokuvula imali enkulu ngokuhweba okuthembekile kwe izimpahla emhlabeni jikelele. Ukuthembela kubheke phambili ekuqashweni kokuqasha okunikeza amandla abaphathi bezinkampani ngamazinga amasha wokufinyelela kumali enkulu, imali, kanye namathuba wezezimali.
Faka isicelo lapha: https://qtum.org/en/about/recruitment
Qtum ukuqasha ezindaweni eziningana: Beijing, Shanghai, Silicon Valley. Uma unolwazi kuzicelo zeselula, le nkampani nakanjani iyindawo enhle kuwe. Isiqondiso sokuthuthukiswa kobuchwepheshe be-R & D blockchain nge-Qtum kuyoba ukuhamba okuhlakaniphile.
Qtum firm inendawo enhle emalini yemakethe yemali. Le misebenzi ye-Cryptocurrency enikezwa yi-Qtum ingakusiza ukuthi uthole umgomo wakho. Futhi nakanjani, vakashela iwebhusayithi yabo ngoba injalo ukukhula kanye nokuqasha emazweni aphesheya.
Faka isicelo lapha: https://litecoin.org/
Enye i-cryptocurrency enhle esekelwe ubuchwepheshe be-blockchain. Le nkampani yenza lula kakhulu kubasebenzisi ngokubavumela ukuthi balayishe konke kumafasitela. Ngeshwa, abanalo isigaba somsebenzi n website. Kodwa ungakwazi thola ukuthunyelwa komsebenzi wenkampani ku-Linkedin. Sikholelwa kakhulu ukuthi le nkampani izoqasha abantu abaningi esikhathini esizayo se-10-15 iminyaka.
Faka isicelo lapha: https://www.cardano.ogr/
I-Cardano crypto lwemali akuyona inkampani eyodwa kuphela. Empeleni, banezinhlangano ze3. Konke ukusebenza umgomo ofanayo, ukufaka isandla ekuthuthukiseni ubuchwepheshe be-blockchain ogama lakhe linguCardano.
Faka isicelo lapha: https://ww.getmonero.org/
I-Monero Cryptocurrency ngenye iwebhusayithi lapho kufanele ubukeke khona. Okwamanje nabo abanayo imisebenzi noma isigaba somsebenzi. Kepha le nkampani iyakhula futhi nakanjani izoba nezikhala zomsebenzi esikhathini esizayo esiseduze.
Faka isicelo lapha: https://holochain.org/team.html
Ngakolunye uhlangothi, uma unamakhono e-CSS angaphambili. Futhi isipiliyoni sokuthuthuka esihle se-HTML. Ungakwazi ube nemisebenzi emihle enikezwayo evela kubo. Futhi ukwakheka kwamakhasi, ukusetshenziswa kwekhasi elilodwa, iReact, React-Native Lolu lonke uhlobo lomsebenzi nesipiliyoni ongaletha kule nkampani.
Faka isicelo lapha: https://ont.io/
Inkampani ye-Ontology, inkampani ye-blockchain e-China. Abaphathi bale nkampani baye baba yizihloko zokuqala ze-blockchain ze-Chinese blockchain. Amaphrojekthi abo abalulekile avela eChina ukujoyina i-Decentralized Identity Foundation. Kukhona okuhle futhi ube nesimo esihle esiphezulu emakethe ye-cap yezimali.
Abaphathi bale nkampani bahlose ukwakha uhlelo olusezingeni elifanele lokuhlukanisa izimilo lomazisi online. Njengoba iphathwe kahle ngamabhizinisi amaningi abasebenzi ihlala njalo onomvuzo ngamathuba amahle emisebenzi. Ngakho-ke, zama le nkampani ngomthombo ovulekile we-blockchain imisebenzi inikeza.
Faka isicelo lapha: https://www.vechain.org/
Inkampani yeVeChain inhle ukuqinisa ngaphandle kwemingcele. I-VeChain iyinhlangano yesikhulumi se-blockchain yomphakathi ephezulu yomkhakha webhizinisi. Zisekelwe eSingapore futhi abaphathi bazo bavela lapho. Ngokuqinisekile, ungaya ekhasini labo bese uthole i-imeyili yomqashi phansi kwekhasi.
I-VeChain ihlose ukuxhumanisa ubuchwepheshe be-blockchain ku- umhlaba wangempela ngokunikeza isakhiwo esibanzi sokuphatha, imodeli enamandla yezomnotho kanye nokuhlanganiswa okuthuthukile kwe-IoT, namaphayona kwizicelo zomhlaba wangempela.
Faka isicelo lapha: https://renproject.io/
Inkampani yeRen yenzelwe ibhizinisi le-crypto futhi inikwa amandla yinethiwekhi ehlukanisiwe yezindawo ezimnyama. Futhi njengokujwayelekile, le nkampani isebenzisa ukubala okuvikelekile okuvikelekile ukusebenzisa izinhlelo zokugcina ubumfihlo. Ngakho-ke, uma unekhono elihle lokuhlela kufanele ubathumele i-CV yakho nephothifoliyo. IRen, inesifiso sokufunda mayelana nayo ngoba iyakwazi ukuzicindezela ukuze ibe yinkampani enkulu.
Faka isicelo lapha: https://ddex.io/
Ipulatifomu ye-DDEX ingukushintshaniswa kokuqala okwakhiwe ku-Hydro Protocol. Inkampani akuyona eyaziwa emhlabeni wonke. Kepha ukukhuluma okuningi, ubuchwepheshe obukhulayo, okunikezela ngaso leso sikhathi, i-oda lesikhathi sangempela kufana nento nokusingathwa kwensimbi. Kuhle ukubukwa kuwebhusayithi yabo. Inkampani iyakhula bangaba neminye imisebenzi ethokozisayo kuwebhusayithi yabo.
Faka isicelo lapha: https://www.bitinka.com/uk/bitinka/home
I-BItinka ngumthengisi we-cryptocurrency neplatifomu yamakhasimende aphesheya. Njengamanje, abanaso isixhumanisi somsebenzi. Kepha, le nkampani a inhlangano ekhulayo. Ngakho-ke, ngokweqiniso kuzofanela ukubukwa kuwebhusayithi yabo.
Faka isicelo lapha: https://www.decred.org/
I-Decred iyinhlangano yemali ye-digital yokuzimela. Uhlamvu lwemali luqala ukusebenza ku-2016. Inhloso yeCredit Decred ukubhekana nokuxazulula ukubusa kwe-blockchain.
Le nkampani ingaphezu kokusungulwa. Ukuthatha izinqumo ezizimele kanye nokuzixhasa ngokwezimali kuye kwasenza sikwazi ukwakha imali eguquguqukayo, eguqukayo ye-digital, mahhala ethonyeni lesithathu.
Faka isicelo lapha: https://www.augur.net/
Inkampani ye-Augur ifana nokubikezela okusebenza ngokuqinile ngokusekelwe ku-blockchain., Yebo-ke balawula i-cryptocurrency yabo kanye ne-blockchain zemali. Amakhasimende angawasebenzisa kuhlelo lokusebenza noma angalanda uhlelo lwawo ku-laptop.
Iphuzu elithakazelisayo lokuthi ngale teknoloji ye-blockchain ungakwazi ukubikezela izinhlekelele noma abahluleki bezezimali ngenkampani uma wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngendlela efanele.
Faka isicelo lapha: https://changelly.com/
Lolu hlobo lwenkanyezi ekhulayo enkampanini yebhizinisi lokushintshanisa okusheshayo. I-Changelly ithatha indlela ehlukile enkambisweni yokushintshanisa yokushintshanisa imali ejwayelekile e-cryptocurrency.
Ngokuguqukayo esikhundleni samakhasimende abo agcina i-cryptocurrency yabo kwipulatifomu yabo yokushintshaniswa kwe-crypto, basungula ukuguqulwa. Lokho ngokuqinisekile ukunikeza izindlela eziningi kakhulu zokugcina inani le-crypto yezentengiselwano. Dubai City Inkampani ikwazile ukuqinisekisa ukuthi abanayo i-web site jet. Kepha kusafanele ukungena futhi ubonakale.
Isiphetho: Imisebenzi kanye Nemisebenzi ku-Cryptocurrency
Ungalichitha isikhathi sakho futhi ufake isicelo seBitcoin e-Dubai. Ngoba i-cryptocurrency iyashesha kakhulu imakethe ekhulayo. Dubai City Inkampani ukusiza abafuna umsebenzi ukuthola umsebenzi. Ikakhulu ngemakethe yobuchwepheshe obuphakeme. Inkampani yethu ilinde ukuqhubeka kwakho okuvuselelwe. Akunandaba ukuthi uvelaphi. Siyathatha abafuna umsebenzi abavela eNdiya futhi ababeka e Dubai. Imisebenzi ye-Cryptocurrency ikhona ivulekele abafudukayo abasha kusuka kuwo wonke umhlaba.
Kukhona enye indlela yokuthola lolu hlobo lomsebenzi. Isibonelo, unga thumela i-CV yakho kumabhodi emisebenzi noma ubhalise imininingwane yakho Indawo yangaphakathi yaseMpumalanga Ephakathi yabasebenzi. Akunandaba ukuthi uzohamba yiphi indlela. Uma nje kunikezwa umsebenzi embonini yezohwebo. Ungumnqobi we ukufuna umsebenzi umdlalo.
IDubai City Company manje ihlinzeka okuhle iziqondiso Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu kanye nomsebenzi ku I-United Arab Emirates ngolimi lwakho.